अर्थ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
काठमाडौं ।बागलुङको अमलाचौरमा वि।सं २०२२ मा जन्मिएका चन्द्रप्रसाद ढकालको अहिले एक सफल व्यवसायी हुन । तर उनको उद्यमशीलताको यात्रा भने त्यति पुरानो छैन ।
सन् २००० बाट व्यवसायिक यात्रा सुरु गरेका ढकाल अहिले उनी आइएमई ग्रुप, ग्लोबल आइएमई बैंक र…
डलर फेयरले ‘बाँचेका’ एयरलाइन्स
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको एक महिना नबित्दै एउटा विषय जोडतोडका साथ आगडि सारे। विषय थियो, आन्तरिक उडानमा रहेका नेपाली र विदेशी नागरिकबीचको विभेदपूर्ण हवाई भाडा अर्थात् आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले लिँदै आएको…
विमानस्थलको कफी सपमा आगलागी
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एक पसलमा आगलागी भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको कफी सपमा आगलागी भएको हो ।
काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले आगलागी भएको पुष्टि गरे ।‘अहिले नगर प्रहरीको दमकल पुगेर नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको छ’,…
काठमाडौँ । बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर विभिन्न २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब बढी ऋण दिएको पाईएको छ ।
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार अख्तियारले बिचौलीयादेखि पूर्वमन्त्रीसहित १७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख…
सरकारको सेयर ३९.७७ बाट झारेर जम्मा ९.०१ प्रतिशत पार्दा समेत सरकार मौन
काठमाडौं । बौद्धस्थित होटेल हायातको जग्गा विवादमा हस्तक्षेप गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय समितिले एक वर्षअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले रुचि देखाएको छैन । सरकार र निजी समूहको संयुक्त लगानी रहेको होटेल हायातको सञ्चालक समितिले गैरकानुनी रूपमा सरकारको सेयर ३९.७७…
प्रदेश २ मा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेले पाँच दिनभित्रै ऋण पाउने
जनकपुरधाम । तपाईंको घर प्रदेश २ मा छ ? र, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुभएको छ ? तर रकमको अभावमा जान सकिरहनुभएको छैन भने अब त्यो चिन्ता हटाउँदा हुन्छ । विदेश जाने युवाका लागि प्रदेश सरकारले बिना धितो ऋण दिने…
जनकपुरधाम । आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा सम्पन्न योजनाको भुक्तानी हालसम्म नदिएको विरोधमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको फोटो भएको ब्यानर टाँगेर जुत्ता प्रहार गरेका छन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासमेत भुक्तानी नपाएको आक्रोसमा उपभोक्ता…
उपसचिवविरुद्ध अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा, २६ वर्षमा चार करोड ६८ लाख कालोधन आर्जन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुंगानाले सार्वजनिक पदधारण गरेको २६ वर्षमा चार करोड ६८ लाख ४८ हजार अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएको छ । उपसचिव ढुंगानाले सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी अवैध रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार…
चिनियाँविरुद्धको अपरेशनलाई नाम दिइयो ‘चार्ली फोक्स्टर’
काठमाडौं । चीन र नेपालको संयुक्त अपरेशनमा १२२ चिनियाँ नागरिकहरुलाई पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीले स्वीकार गरेको छ । यो अपरेशनलाई ‘चार्ली फोक्स्टर’ नाम दिइएको छ ।
सोमबार एकैदिन काठमाडौंका बिभिन्न स्थानबाट १२२ जना चिनियाँ नागरिकहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो । चिनियाँ…